Apple Inoburitsa Zvikwata Kugadzirisa Kusagadzikana kweWebKit & Mac Bhatiri Drain
Apple yakaburitsa zvakakosha zvekuchengetedza zvigadziriso kugadzirisa nyowani zero-zuva njodzi inogona kubvumira vanorwisa kubira iPhones, iPads, uye Macs.
Kusagadzikana kwezero-zuva kunonzi CVE-2022-22620 kwakaziviswa kuApple nemuongorori asingazivikanwe. Iyi bug ndeyekushandisa-mushure-yemahara ndangariro huwori bug muWebKit inopa injini, iyo inopa simba Apple's web browser Safari.
Kubudirira kushandiswa kweiyo 'CVE-2022-22620' bug kunogona kubvumira vanotyisidzira kuti vagadzirise zvine hukasha zvakagadzirwa zvewebhu izvo zvinotungamira 'kupokana kodhi kuuraya' pane dzakasiyana siyana dzeApple.
"Apple inoziva nezvemushumo wekuti nyaya iyi inogona kunge yakashandiswa zvakanyanya," kambani yakadaro mukutaura ichibvuma chikanganiso. Nekudaro, ichiri kupa mamwe tekinoroji ruzivo pamusoro pekusagadzikana.
Hofori yeCupertino yakagadzirisa nyaya iyi nekuburitsa zvigadziriso zvekuchengetedza zvine ndangariro dzakagadziridzwa iOS 15.3.1 uye iPadOS 15.3.1, macOS Monterey 12.2.1, uye Safari 15.3 (v. 16612.4.9.1.8 uye 15612.4.9.1.8) ye macOS Big Sur uye Catalina.
Iyo iOS 15.3.1 uye iPadOS 15.3.1 inogadziridza inobata yakakosha WebKit kusagadzikana iyo inokanganisa mabhurawuza ese epa iPhone uye iPads, pamwe nebug yekusvikika iyo inogona kukonzera Braille kuratidza kumira kupindura.
Apple yakaburitsawo macOS Monterey 12.2.1 yayo Mac-based browser ine yakagadziridzwa ndangariro manejimendi kugadzirisa ine Bluetooth-inoenderana nebhatiri-drain nyaya paMacBooks inomhanya paIntel CPUs.
"MacOS 12.2.1 inopa zvakakosha kuchengetedza uye inogadzirisa nyaya yeIntel-based Mac makomputa izvo zvinogona kuita kuti bhatiri ripere panguva yekurara kana rakabatana neBluetooth peripherals," akadaro Apple mune chigamba manotsi eMac.
Rondedzero yakazara yemamodheru akabatwa anopihwa pazasi:
iPhone 6s uye gare gare,
iPad Pro (ese mamodheru), iPad Air 2 uye gare gare, iPad 5th chizvarwa uye gare gare, iPad mini 4 uye gare gare, uye iPod touch (7th chizvarwa)
Macs anomhanya macOS Monterey
Vese vashandisi veApple vanokurudzirwa zvakanyanya kuti vagadzirise maPhones, iPads, uye Macs kune yazvino vhezheni yekushandisa system kudzivirira kurwiswa kungangoita.
The post Apple Inoburitsa Zvikwata Kugadzirisa Kusagadzikana kweWebKit & Mac Bhatiri Drain yakatanga kutanga TechWorm.
Chizere Chinyorwa che Windows Mira Kukanganisa Makodhi (Bug Tarisa)
Maitiro ekushandisa iPad sechipiri chekutarisa: Batanidza Mac uye iPad skrini